कसरी प्राप्त गर्न इन्टरनेटमा एक मान्छे संग परिवार र सम्बन्ध
पहिले, सबैभन्दा साधारण साइटहरु को डेटिङ थिए, रात क्लब, बैठक मित्र माध्यम, वर्तमान समयमा, थुप्रै तरिकामा छन् डेटिङ मा हाम्रो प्रगतिशील समाज । सबैभन्दा लोकप्रिय छन् परिचितों सामाजिक सञ्जाल मार्फत र एक किसिम को डेटिङ साइटहरु.
यो खण्ड विशेष प्रासंगिक, तपाईं भने साँच्चै गम्भीर छन् संग प्राप्त गर्न को मान्छे । प्रयास आफूलाई अलग गर्न सकेसम्म धेरै छ । नियमित भेट्न पार्क गर्न निश्चित हुन, यो उल्लेख छ । भविष्यमा, तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ आमन्त्रण एक मान्छे एक पैदल लागि सँगै । के छैन भर्नुहोस् प्रश्नावली प्रोफाइल संग अधिक जानकारी । मलाई विश्वास छ, त्यहाँ छन्, अधिक रोचक पुस्तकहरू भन्दा आफ्नो जीवनी । डाउनलोड फोटो । एक नियम को रूप मा, डेटिङ साइटहरु र सामाजिक नेटवर्क को एक धेरै प्रोफाइल बिना फोटो । तिनीहरूले आनन्द थिएन सफलता । मा एक धेरै अधिक सुखद कुराकानी संग कसैले मा एक नेटवर्क भएको कम्तिमा केही विचार बारे वार्ताकार. तर, सारा एल्बम फैलिएको छ । आफ्नो विरोधी भन्ने विचार हुन सक्छ तपाईं बाँच्न सीधा मा भर्चुअल संसारमा छ । आदर्श यो राख्न सिफारिश — फोटो । यो हुनुपर्छ, आफ्नो सबै भन्दा राम्रो तस्वीर हुनेछ भनेर हामीलाई बताउन एक सानो तपाईं बारेमा छ । प्रयास कुराकानी गर्न, आदरपूर्वक र कौशलतासाथ. के छैन संग एक संवाद सुरु गर्न एक आगन्तुक तपाईं संग मानिस शब्द: ‘नमस्कार । तपाईं कसरी हो ।. यो असम्भाव्य छ कि एक मानक दृष्टिकोण हुनेछ चासो वार्ताकार. पनि छैन, ध्यान को कर्कश गरेको फोटो, उपहार वा विभिन्न । यदि भुक्तानी उपहार विशेष रूप डिजाइन समृद्ध रचनाकार को साइटहरु, त्यसपछि र ईमोटिकनहरू प्रतिनिधित्व गर्न तत्व को पहिचान । आफ्नो कार्यहरू द्वारा, बाटो, अत्यन्तै. सुरु छैन संग संचार. आफ्नो वार्ताकार प्रशंसा न तातो न चिसो । साथै, तपाईं गर्न सक्छन् सुरुमा भरोसा गुमाउन. समीक्षा ध्यान सबै चित्र र जानकारी पढ्न मन पर्यो तपाईं को मानिस. प्रयास गर्न पाउन साधारण गतिविधिलाई छ । यस्तो दृष्टिकोण हुनेछ विकास एक अनुकूल संवाद र सुरु हुनेछ एक लामो च्याट. प्रश्न को अन्य पक्ष छ । त्यसैले, तपाईं बिस्तारै समावेश विरोधी च्याट मा. जवाफ दिन एक अधिक विस्तृत, आफ्नो समय लिन छैन. प्रश्न राख्न प्रयास गर्न भनेर तिनीहरूले प्राप्त छैन स्पष्ट जवाफ ‘हो’ वा ‘कुनै.
‘पालन रूसी व्याकरण
चिन्ता छैन कुरा गर्न. सबैलाई छ आफ्नै मामिलामा । लेख्न छैन, एक व्यक्ति को हरेक मिनेट. यो राम्रो कुरा गर्न एक पटक एक दिन, तर. खैर, यो समय को लागि कुरा गर्न सम्भव छ, पूर्व-संग बातचीत कसैले. मिनेट आफ्नो कथाहरू साझेदारी र घटनाहरू समयमा भयो कि दिन. यो धेरै अधिक रोचक बस भन्दा जो पत्ता लगाउन, के छ मा हाल प्रयोग र कसरी गर्न छ । के छैन स्थगित बैठक । भर्चुअल संचार धेरै महिना लाग्न सक्छ. तर धेरै मा जिद्दी गर्न बैठक आवश्यक छैन । प्रस्ताव गर्नुपर्छ. उदाहरणका लागि, तपाईं गर्न सक्छन् प्रदान गर्न जान सिनेमा एक दिन को लागि सत्र वा पार्क मा एक पैदल छ । तपाईं छन् भने, तल फर्केर, यो सोच्न. इन्टरनेट एक धेरै को त्यसैले-भनिन्छ भर्चुअल मान्छे, कि सिद्धान्त मा, छैन लागि कन्फिगर प्रत्यक्ष संचार ।
← भावनाहरु च्याट
संयुक्त राज्य अमेरिका चिनियाँ - भिडियो खोज इन्जिन मा खोज →